UK plans to cut Zimbabwe land mine clearing aid causes jitters – VicFallsLive
UK plans to cut Zimbabwe land mine clearing aid causes jitters
Cuthbert Mutukwa (42) left his family in Zimbabwe to work for two years de-mining the Falkland Islands, the British overseas territory that was peppered with about 13,000 mines by Argentinian forces during the 1982 war.
The Falklands were declared “mine free” in 2020 after Mutukwa and other Zimbabwean de-miners worked in tough conditions to rid the islands of the explosive devices. Mutukwa, an employee of the Halo Trust, says he cleared 218.
Zimbabwe is one of the most heavily mined countries in the world, with dense zones of landmines laid by the former Rhodesian regime along the country’s borders with Mozambique and Zambia during the liberation war in the 1970s.
The Halo Trust estimates that these unfenced minefields have killed or injured more than 1,500 people since independence in 1980.
I a statement , Darren Cormack, CEO of the Mines Advisory Group (Mag), said: “To cut all funding to Zimbabwe seems especially unjust in light of the fact it was Zimbabwean de-miners who helped the UK to make the Falkland Islands landmine-free just a year ago.”
The Foreign, Commonwealth and Development Office was approached for comment. – The Guardian
← Football resumes in Victoria Falls’ Mvuthu area
Matheas Mhere headlines Hwange church leader’s album launch →
Picture of a flooded classroom was taken in Kenya, not Binga
Fearing hospitals, Zimbabwe’s Covid-19 patients treat themselves
Bulawayo’s double shift schools put students in the hot seat